Blue Warface Hack ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Blue Warface mbanye anataghị ikike
Blue Warface bụ mbọ kachasị ọhụrụ anyị nwere na Warface!
Nweta uzo kacha mma nke Warface ma ị gha agha agha ọzọ. Zụta igodo ngwaahịa ụbọchị 1 taa!
Na-eche ike nke Warface Blue mbanye anataghị ikike maka ogologo karịa otu ụbọchị. Zụta otu ngwa ahịa izu 1 taa!
Na-achọ ọbụna oge iji rụọ ọrụ na Warface mbanye anataghị ikike anyị? Keyzụta igodo ngwaahịa ọnwa 1 taa!
Agbanyeghị na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ dị n'ahịa na-azọrọ na ị ga-eme ka ị bụrụ onye isi Warface, ole na ole n'ime ha ga-arụ ọrụ dị ka nke a. Jiri Warface Blue iji nweta ihu na onye mmegide gị n'ọnọdụ ọ bụla, n'agbanyeghị agbanyeghị nkà ha nwere!
Warface Blue Hack Ozi
Ndị ọrụ Warface enweghị ngwa ọrụ a pụrụ ịdabere na ha iji ogologo oge, mana anyị na-achọ ịgbanwe nke a na Gamepron. Anyị chọrọ imepụta ngwá ọrụ nke ndị ọrụ anyị niile nwere ike ịdakwasị mgbe ọ dị ha mkpa karịa ma ọ bụ ọbụlagodi nke ha nwere ike iji maka egwuregwu niile ha. Ma ị chọrọ anataghị ikike subtly ma ọ bụ nanị obliterate onye ọ bụla na-anọchi gị ụzọ, iji anyị Warface Blue mbanye anataghị ikike ga-ekwe ka ị nweta ya. Ọnụ ọgụgụ nke njirimara naanị kwesịrị ezu iji mee ka ị nwekwuo mmasị, yabụ echefula ya.
Ndị iro ESP na Ama nọ na ngwá ọrụ a, na-enye gị ohere ịhụ ahụ ike, anya, aha, na ngwa agha. A na-egosipụta ebumnuche anyị na Warface Blue, gụnyere FOV Circle, Visibility Checks, Bone Selection, Multi Aim Keys, and our nanị "Silent Aim". Crosshair na Panic Key nọkwa!
Ozi Iro (ahụike, anya, aha, ihe agha)
Banyere Warface Blue
Blue Warface karịrị karịa ka ọ dị na Warface cheat gị, ebe anyị jisiri ike tinye ihe niile kachasị mkpa n’ime ya. Nke a bụ ihe dị iche iche bara uru nke na-enye karịa naanị ebumnuche dị ike, ebe ọrụ ESP dị mma karịa mgbe ọ bụla. Ikwesighi iju anya ma odi ihe ozo di n’akuku ozo nke mgbidi ozo, ma oburu na odi, Warface aimbot gha eme ha. Onwem na HWID Spoofer, a eji Aghọ Aghụghọ Ule pụrụ ọbụna-eji ndị na-ugbu a ngwaike ID amachibidoro! Gbanyụọ nchedo na mgbochi nje tupu launching a mbanye anataghị ikike, n'ihi na mbanye anataghị ikike ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị.
Gini kpatara iji jiri ejiri mee ihe dika ndi ozo dika ndi ozo
Gamepron na-edebe onye ọrụ tupu ihe ọ bụla ọzọ, nke mere na anyị na-enye nsonaazụ kachasị mma mgbe ị na-egwu egwu. Ngwaọrụ ụfọdụ ga - etinye gị n'ihe egwu nke ịmachibido gị iwu, nke na - abụghị ikpe ebe a - naanị anyị na - ekwe ka ndị na - adịghị achọpụta mee ka ụzọ ha dịrị n'aka ndị ọrụ anyị! Ọ bụrụ na ị zụrụ mbanye anataghị ikike si Gamepron, ị nwere ike iji ya na obi ike. Inweta mmachi abughizi nsogbu mgbe ị na-eji Warface Blue kpochapu, ma ị nwedịrị ike igwu egwu na ọnọdụ ihuenyo mgbe aghụghọ ahụ nọ n'ọrụ! Maka ahụmịhe kachasị mma enwere ike, enweghị ebe ọzọ ị ga-aga kama Gamepron.
Mgbanwe ndị a bụ isi akụrụngwa nke ịghọ ezigbo hacker, dị ka ị ga-mkpa toggle ụfọdụ ntọala na gbanyụọ n'oge egwuregwu maka ezigbo ịrụ ọrụ. Mgbe ị chọrọ ịnọgide na-a aghụghọ hacker, ịmụta nkà nke "toggle" bụ a kwesịrị! Mgbe ị matara na ị nwere ike igbu onye iro, nweere onwe gị iwepu Warface aimbot ma wepụta ha n’onwe gị! Pụrụ ọbụna gbanyụọ kpọmkwem ESP nhọrọ na-adịkwaghị mkpa, na-enye gị obere ozi na-echegbu onwe banyere na ihuenyo. Gbanwee oke nke FOV Circle gị, Ọkpụkpụ Prioritization, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ metụtara na Warface Blue mbanye anataghị ikike iji anyị n'ụzọ zuru oke na-emejuputa atumatu egwuregwu.
Q1. Gịnị bụ mpụga ngwa ọdịnala dị gị mkpa igba a eji Aghọ Aghụghọ Ule?
A1. Ọ dị mkpa ịnwe ndetu Discord maka ederede.
A6. Ee, ị nwere ike igwu egwu na onyo ihuenyo.
Fọdụ ndị egwuregwu ga-agbara ihe hacks ọsọ n'ihi na ha na-echegbu onwe ha maka mmachi, mana nke ahụ agaghị ekwe omume ebe a. Achọpụtaghị aghụghọ anyị niile iji chekwaa ndị ọrụ GamePron.
Kedu ihe ị na-eche? Nweta ma bido mmeri ọtụtụ egwuregwu taa!
Njikere Na-achị na anyị Warface Blue Hack?